Chine China Import sy Export Fair (Canton Fair) Ozisialy ofisialy an'ny mpividy sy ny mpamatsy | Huaihai Holding Group
Ny orinasantsika, Huaihai Holding Group dia mpanamboatra lehibe ao indostrian'ny fiara mini, nandritra ny 44 taona lasa izay, dia manohy manome vahaolana mitety ny olona amin'ny sokajin-taona sy sokajy ary firenena samihafa izahay. Ary nanomboka teo aloha dia mikarakara ny fomba hahatonga ny zokiolona hitondra fiara miadana kokoa sy tony isika. Ary izany no lohahevitra ankehitriny.
Ankehitriny dia lasa olana lehibe manerantany ny mponina antitra. Araka ny fanadihadiana natao tamin'ny Internet, tamin'ny taona 2018, dia misy 8,5% -n'ny mponina manerana izao tontolo izao ny isan'ny mponina mihoatra ny 65 taona. Ary antenaina fa amin'ny taona 2050, mitombo 17% io isa io. Tany Eropa aryAmerika Avaratra, maherin'ny 25% ny isan'ny olona mihoatra ny 65 taona, izany hoe isaky ny olona 4 afaka mifanena amin'ny "antitra" iray ianao.ListCanton Fair amin'ny Internet
Nanova ny fiainantsika andavanandro ny isan'ny antitra ary mitondra olana maro mifandraika amin'izany. Any amin'ny firenena maro, ny fahazoan-dàlana mitondra fiara dia hofoanana amin'ny olona 65 taona raha tsy nanao fitsapana fanao isan-taona. Mampidi-doza ihany koa ho an'ny zokiolona ny mitondra fiara na moto Electric eny an-dalana, ary ny fitateram-bahoaka matetika dia tsy mora mihitsy ny ankamaroan'ny fotoana. Noho izany dia marary saina raha tsy mivoaka ny zokiolona. Amin'izany, maniry ny hanome ny vahaolana izahay. Manoro hevitra izahay zokiolona mitondra fiara fitaterana herinaratra mba hamahana ny olan'izy ireo. Ny eo anilako dia iray amin'ireo maodely nasongadintsika, afaka mijery isika.Buy Fair Buyer
Nahoana mpitondra bisikiletamety amin'ny zokiolona? Heveriko fa misy antony lehibe farafahakeliny 3. Voalohany indrindra,bisikiletany dia azo antoka kokoa. Raha ny rafitra dia azo antoka kokoa noho ny kodiarana 2, ary mametra ny hafainganam-pandehan'ny haingam-pandeha ambony isika amin'ny 25 km / h, izay tsy hafainganana mihitsy fa tsara ho an'ny lahiantitra. Faharoa, mahazo aina kokoa ny bisikileta rehefa mitondra fiara. Izahay dia mampiasa cushion seza ambony indrindra ho an'ny seza mpamily sy seza mpandeha. Tsy mora reraka na dia mitondra fiara mandritra ny ora maro. Ny fahatelo dia ity haben-dresaka ity dia manana habe kely kokoa, 8 tongotra ny halavany, 3.4 metatra ny sakany. Tianao raha mitondra fiara eny amin'ny arabe marobe.Fair Fair Online
Araka ny efa fantatsika dia ny moto no fototry ny fiara. izanybisikiletany dia misy motera 60V1000W, mampiasa marika voalohany izahay, manana ny fanaovana ny torolàlana manomboka lehibe, ny valin-kafatra haingana ny fanamafisana, ny fahafaha-miasa mahery vaika, ny feo mafy, ny fandefasana milamina, ny asa fanompoana lava. Mahatratra 2200W ny tanjaky ny haavony, manome ny hafainganam-pandeha ambony indrindra 30km / h, ampy ho an'ny fiara mitondra ny zokiolona.
Ny ampahany lehibe faharoa dia ny mpanapaka, ny mpanamboatra dia manana fahombiazana fiovam-po avo, tsy manomboka ny jitter, ny hery mahery vaika, ny fiarovana ny herinaratra ambany. Manana fiasa ao amin'ny tena izy: fanamarinana mandinika tsara sy fizahan-tena static. Raha mbola eo amin'ny sehatry ny fahefam-pahefana ny mpanitsy, dia ho hita avy hatrany ny fanjakana misy ny fifandraisana eo aminy, toy ny fihodinana, famindrana braking na famindrana ivelany, sns. ny fiarovana amin'ny fandehanana.
Ny fahatelo dia ny famaky aoriana, misafidy ny rafi-pitantanan-ketra amin'ny kalitao fototra isika ary ny dingan-jiro avo lenta dia ampiasaina amin'ny antsasaky ny antsimo. Ny lanjan'ny kilasy P5 dia miantoka ny fahatoniana kalitaon'ny rafitry ny fifindrana namboarinay ho anay, ilay fantsona famaky:φ56mm, ny 3.5mm ny hateviny.Buy Fair Buyer